सपथ पछि शेरबहादुर देउवाको पहिलो निर्णय कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक ? – Life Nepali
सपथ पछि शेरबहादुर देउवाको पहिलो निर्णय कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक ?
सपथपछि शेरबहादुर देउवाको पहिलो निर्णय कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशकप्र म शेरबहादुर ज्यू, सपथपछि पहिलो निर्णय कुलमान घिसिङलाई बोलाएर फेरि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुहोला। जनताको मन जित्न ठूल्ठूला कामहरू गर्नै पर्दैन। यस्तै ससाना कामहरूले हो जनप्रिय हुने। यश अघि बिजय लामाले पनि कुलमान लाई पुन नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
नेपाल वायु सेवा निग’मका वरिष्ठ “पाइलट विजय लामाले देशमा लो’डसेडिङ सुरु हुन थालेको भन्दै “आ,क्रोश पोखेका छन्। र नेपाल विद्युत् प्राधि’करण मा का’र्यकारी निर्दे’शक कु लमान घिसिङ भएका बेला लो’ड सेडिङ नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले किन हुन थाले को हो भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
यो देशमा कुलमान नभएको भए आज पनि लो डस्रेडिङ खे प्नु पर्थ्यो”।शनिबार बि’हान सामा’जिक स’ञ्जालमा ला’माले ले’खेका छन्, फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन थालिसक्यो। बिस्तारै समय अवधी बडाउदै जाँदै छ! त्यहि भएर हामीलाई कुलमान चाहिन्छ । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous यी जोडीले सवा ४ किलोको आँप फलायर राखे गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड
Next सपथ ग्रहण स्थलमा पुगेका देउवा राष्ट्रपतिसंग रि’साए, ! यस्तो छ कारण :